Cool Domains for Sale: - war.money, FatLy.co, YeuNu.com, NokiaN2.com, wish.style, BrandWait.com, CTRCoin.com,
Taabo bar cinwaanka iyo nooca about:config saxaafadda Enter.
Press I'll be careful, I promise! button si ay u tagaan Firefox page goob.
Press Alt muhiim ah haddii aad arki kari maayo Menu Bar; ka dibna dooro Tools menu, qaado Options item.
Dooro Content tab marka Options suuqa kala booda baxay.
Reload (F5 ) Bogga.
In ka Apple/System bar, dooro Firefox item menu; ka dibna soo qaado Preferences... ka menu hoos-hoos ah.
Xir ah Options furmo suuqa si loo badbaadiyo isbedel aad markaas u raaxayn bogga.
Reload biraawsarkaaga si ay u arkaan isbedelka.
Asal ahaan, waxaan u malaynayaa in haddii aad choosed Linux si ay u isticmaalaan, laga yaabee in aad ku fiican oo ku filan si ay u ilaaliyaan wax walba si fiican u shaqeeyaan. Dhab ahaantii aad u ogaato sida loo beddelo badan Firefox configs / preferrences sida aad rabto.